AMISOM Oo War ka soo Saartay Dad Shacab ah Oo Ciidamadooda ku Dileen Magaalada Muqdisho.(Akhriso) | Awdalmedia.com
AMISOM Oo War ka soo Saartay Dad Shacab ah Oo Ciidamadooda ku Dileen Magaalada Muqdisho.(Akhriso)
Taliska ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhacdadii shalay ciidamadoodu ku dileen dad shacab ah ka dib qaraxyo lagula eegtay agagaarka isgoyska Ex-control Balcad oo ka tirsan degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada AMISOM oo rasaas furay qaraxa ka dib ayaa dilay afar qof oo ka mid ahaa shacab goobtaas ka dhowaa halka qaar kale ay dhaawaceen, waxaana falkaas ka carooday shacabka Muqdisho iyadoo dowlada federaalka oo si kulul uga hadashay dhacdadan ay AMISOM ka dalbatay in maxkamad la soo taago askartii ku lugta laheyd.
War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayeyt ku sheegtay iney ka walaacsan tahay eedeynta loo jeediyey ciidankooda oo ku saabsan iney ku lug lahaayeen shacab la dilay.
AMISOM waxay sheegtay iney baareyso dhacdadan, ayna aad uga xun yihiin dhibaatada shacabka gaartay, iyagoo tacsi u diray qoysaska dadka geeriyooday.
Qoraalka ka soo baxay AMISOM oo u dhignaa sidan tan:-